नेपाल पुरै माफियाको चंगुलमा, मुक्ति पाउन कठिन !
सरकार नै स्वार्थ समूहको लागि जनता मार्ने काम गर्दै !
उनले भने जस्तो उनको कार्यकालको बजेट पनि कुनै व्यवसायीलाई उच्चस्तरको सबैले बुझ्ने किसिसमको ‘लाभ–हानी’ पुर्‍याउने कामबाट नै प्रेरित रह्यो । अर्थमन्त्री नभएका बेला उनी आफैंपनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत करका दर हेरफेरमा सरिक भए । ओली नेतृत्वकोे दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट माफियासँगको मिलोमतोको उदाहरण मानिएको थियो । त्यसबेला पनि विद्युतीय सवारी साधनमा चालु वर्ष ०७९–८० को जस्तै चर्को कर लगाइयो र विद्युतीय सवारी साधनलाई अत्यधिक महँगो बनाइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए ठीक अहिलेका अर्थ मन्त्री शर्माले जस्तै गरी । त्यसबेला खतिवडाको भनाइ थियो–
ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ सरकाका अर्थमन्त्री (युवराज खतिवडा) ले तीनवटा बजेट प्रस्तुत गरे । उनका यी तीनवटै बजेट कुनै न कुनै स्वार्थ समूहको हितमा रहेको भनी विवादमा पर्‍यो। ती बजेटबाट सबभन्दा लाभान्वित हुने समूह थियोे विशाल ग्रुप । यो समूह लाभान्वित हुनेमा विवरणहरूले नै चिनायो । खतिवडाले आफ्नो बजेटमा बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनको कर पाँच गुणासम्मले बढाइदिएको घटना यही ग्रुपको कारोबारलाई मदत गर्न थियो भनी त्यसबेलाका समाचार विवरणहरूले बताइरहेका थिए । यो बजेट घोषणा भएको केही दिन अघिमात्रै यो समूहले धेरै नै ठूलो संख्याको विजुलीगाडीहरू भित्र्याएको थियो । त्यसैमा पर्छ आयातित चकलेटमा लाग्दै आएको कर घटाइदिएका कुरा पनि । विशेषगरी यी दुई विषयमा संसद्‌मा त्यसबेला चर्को आवाज उठ्यो। सांसदहरूले प्रश्न गरे । नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीहरूले प्रस्टीकरण माग गरे । सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले समेत खतिवडाको जवाफ माग भयो उनले यी दुई करको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । न त उनले बिजुलीबाट चल्ने सवारीमा लगाएको करको औचित्य नै पुष्टि गरे ।
अवस्था अर्थमन्त्री शर्माकै जस्तो थियो । दर हेरफेरका विषयमा संसद्‌मा प्रश्न उठे तर अर्थमन्त्रीको उत्तर तर्कसंगत थिएन ।